Ny fihaonana dia manamora ny fihaonan'ny olona | Famoronana an-tserasera
Ny fihaonana dia manamora ny fihaonana amin'ny olona
Amin'ny fomba voafintina dia azo lazaina fa ny Meetup dia tranonkala natokana hanamorana ny fihaonana olona te hitrandraka, hahita ary / na hianatra zavatraKa raha mpamorona sary ianao ary te hianatra zavatra vaovao amin'ny mpamorona hafa dia ity no tranokalanao.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao lafin-javatra efatra izay toa mora fotsiny momba an'ity tranonkala mahatalanjona ity ary ao amin'ny Meetup azonao ny zava-drehetra.
Meetup dia mitondra anao ny zava-drehetra manomboka amin'ny fanatanjahan-tena ka hatramin'ny sarimihetsika, zavakanto, dihy ary maro hafa. Ity tranonkala ity dia tsy mametra ny mpampiasa mifandraika amin'ny sokajy, satria tena azo atao ny mahita fizarana idealy maro ho an'ny olona samy hafa ny zavatra tiany sy mahaliana azy.
Tsy mila manam-pahaizana ianao, satria na sarotra na tsy dia fahita, hisy ny hetsika ho an'ny kilasy matihanina manokana ihany na ny fidirana amin'izany dia miankina amin'ny fananana karazana fiofanana. Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ireo hetsika ireo dia misokatra ho an'izay maniry mihaino, mifanakalo hevitra ary mianatra bebe kokoa momba ny lohahevitra voaresaka.
Ny Meetup dia manivana ireo fisehoan-javatra eny akaiky eny, vondrona sy hetsika marobe no mety hipetraka amin'ny toerana tsy dia azon'ny olona loatra. Na izany aza, tsy manakana anao tsy ho isan'izy ireo izany ary mandray anjara amin'ireo dinika izay atao amin'ny forum ary mifandraisa amin'ny mpikambana sasany aza mba hifanakalo hevitra.
Ankoatra an'io safidy io dia mikarakara ihany koa ny Meetup sivana ny zava-nitranga teny akaiky avy amin'ny toerana misy anao, mba ho mora aminao ny manatrika ny iray amin'izy ireo.
ihany koa afaka mamorona ny vondrona misy anao ianao, ka raha manana hevitra ianao dia te hihaona amin'ny mpiasa sasany ianao mba hiresaka momba ny lohahevitra manokana na raha te-hanangona olona maromaro ianao hanao karazana asa ao anatin'ny vondrom-piarahamonina iray, efa tsy mila miandry ianao vao hiseho ilay vondrona mety indrindraKoa satria azonao atao ny mamorona ny vondrona misy anao sy ny fivoriana hataon'izy ireo, mba hahatonga anao tsikelikely ho lasa mpandray anjara fotsiny dia azonao atao ny mandamina.
Ny Meetup dia manana zavatra tsara ihany, satria hihaona amin'ny olona ianao, ho afaka hahafantatra zavatra tsy fantatrao, ho afaka hampianatra zavatra tsy fantatry ny olon-kafa ianao ary na dia safidy tsara io raha mitady tetik'asa asa atao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ny fihaonana dia manamora ny fihaonana amin'ny olona
Endritsoratra maimaim-poana amin'ny volana septambra
Toetra 10 ilainao hiasa amin'ny maha-Freelancer anao